Isilinganiso sokubala sesilinganiso
Amanani wokushintshaniswa kwemali emhlabeni jikelele. Ukuguqulwa kwe-inthanethi kunoma iyiphi imali.
Rand (ZAR) Euro (EUR) US dollar (USD) Yuan (CNY) Yen (JPY) Afghani Afghan (AFN) Ariary Malagasy (MGA) Aussie dollar (AUD) Bahrain dinar (BHD) Baht Thai (THB) Balboa Panamanian (PAB) Bangladesh Taka (BDT) Barbados dollar (BBD) BaseChile Unidad de Fomento (CLF) Belize dollar (BZD) Bermuda dollar (BMD) Bhutan Ngultrum (BTN) Boliviano saseBolivia (BOB) Bosnia and Herzegovina uphawu convertible (BAM) Botswana Pula (BWP) Brazilian real (BRL) Brunei dollar (BND) Burundi franc (BIF) CFC franc (XAF) CFC franc (XOF) Cape Verde Escudo (CVE) Cayman Islands dollar (KYD) Cordoba baseNicaragua (NIO) Costa Rica colon (CRC) Denar Macedonian (MKD) Dinar Algeria (DZD) Dinar Kuwaiti (KWD) Dinar Serbian (RSD) Dinar Tunisian (TND) Dinar waseLibya (LYD) Dirham Moroccan (MAD) Djibouti franc (DJF) Dollar Bahamian (BSD) Dollar Canadian (CAD) Dollar East Caribbean (XCD) Dollar Jamaican (JMD) Dollar Namibian (NAD) Dollar entsha Taiwan (TWD) Dominican peso (DOP) Dram-Armenian (AMD) Ethiopian Birr (ETB) Falkland Islands ganda (FKP) Fiji dollar (FJD) Florin UmAruba (AWG) Forint Hungarian (HUF) Franc Comoran (KMF) Franc Congolese (CDF) Franc Swiss (CHF) Franc baseRwanda (RWF) French Pacific franc (XPF) Gambian dalasi (GMD) Ganda Egyptian (EGP) Ganda Lebanese (LBP) Ganda Sudanese (SDG) Ganda Syrian (SYP) Ghana Cedi (GHS) Gibraltar ganda (GIP) Gourde Haitian (HTG) Guarani (PYG) Guernsey ganda (GGP) Guinea franc (GNF) Gulden Antilliaanse (ANG) Guyana dollar (GYD) Hondura Lempira (HNL) Hong Kong dollar (HKD) Hryvnia (UAH) I-Troy ounce yesiliva (XAG) IZimbabwe dollar (ZWL) Iceland krone (ISK) Igolide elilodwa le-Troy / igolide electronic) (XAU) Ikholoni El Salvador (SVC) Iraqi Dinar (IQD) Israeli yeshekeli entsha (ILS) Jersey ganda (JEP) Jordan dinar (JOD) Kazakhstani Tenge (KZT) Kenya usheleni (KES) Kina (PGK) Koruna Czech (CZK) Krona Swedish (SEK) Krone Norwegian (NOK) Kroon Estonian (EEK) Kuna Croatian (HRK) Kwanza (AOA) Kyat Burmese (MMK) Lao Kip (LAK) Lari Georgian (GEL) Latvian lat (LVL) Lek Albanian (ALL) Leone (SLL) Leu Romanian (RON) Leu baseMoldova (MDL) Lev Bulgarian (BGN) Liberia dollar (LRD) Lilangeni (SZL) Lilangeni (LSL) Lira Maltese (MTL) Litas Lithuanian (LTL) Malawi Kwacha (MWK) Malaysin Ringgit (MYR) Manat Azerbaijani (AZN) Manx ganda (IMP) Mauritius Rupee (MUR) Metical waseMozambique (MZN) Naira Nigerian (NGN) Nakfa (ERN) NaseSurinam dollar (SRD) New Turkish lira (TRY) New Zealand dollar (NZD) North Won Korean (KPW) Okokuphrinta (GBP) Ouguiya Mauritanian (MRO) Pa`anga (TOP) Pakistan Rupee (PKR) Pataca Macanese (MOP) Peruvian Nuevo Sol (PEN) Peso Argentine (ARS) Peso Chilean (CLP) Peso Colombian (COP) Peso Cuban (CUP) Peso Mexican (MXN) Peso Uruguay (UYU) Philippines peso (PHP) Quetzal laseGuatemala (GTQ) Rial Iranian (IRR) Rial Omani (OMR) Rial Yemeni (YER) Riel Cambodian (KHR) Riyal Qatari (QAR) Riyal Saudi (SAR) Ruble Belarusian (BYN) Ruble Russian (RUB) Rufiyana Maldivian (MVR) Rupee Indian (INR) Rupee Nepalese (NPR) SDR (Special drawing amalungelo) (XDR) Saint Helena ganda (SHP) Seychelles Rupee (SCR) Singapore dollar (SGD) Solomon Islands dollar (SBD) Som Kyrgyzstani (KGS) Somoni Tajikistani (TJS) Sri Lanka Rupee (LKR) São Tomé and Príncipe Dobra (STD) Tala (WST) Trinidad and Tobago dollar (TTD) Tugrik-Mongolian (MNT) Turkmenistan manat entsha (TMT) UAE Dirham (AED) URupiah Indonesian (IDR) Uganda usheleni (UGX) Umqhele Danish (DKK) Usheleni Tanzanian (TZS) Usheleni waseSomali (SOS) Uzbekistan sum (UZS) Vanuatu Vatu (VUV) Vietnamesse dong (VND) WaseVenezuela Bolivar fuerte (VEF) Won South Korean (KRW) Zambian Kwacha (ZMW) Zambian Kwacha (ZMK) Zloty Polish (PLN)
Isilinganiso sokubala sesilinganiso - insiza eku-inthanethi ekuvumela ukubala amanani wokushintshana ngemali ephansi emhlabeni, is.
Rand libekwa nsuku zonke yi-European National Bank. Rand ama-cross ruble nawo asetwa nsuku zonke yibhange elikhulu lelizwe. Isibalo sokushintshaniswa kwesilinganiso sikhombisa lolu lwazi kusuka kwimithombo esemthethweni mahhala.
Ungabona lezi zinani ezimbili ze Rand amanani okushintshaniswa kunoma iyiphi enye imali kwiwebhusayithi cheleteratestoday.com ekusebenzeni kwethu Isilinganiso sokubala sesilinganiso.
Ukuguqulwa kwemali noma ukushintshaniswa kwemali eyodwa ngesilinganiso esihle kwenziwa kumabhange okuhweba. Izinga lokushintshana ebhange lisethwe ngesisekelo samanani wemali enqamula phansi, abhekelwe nsuku zonke kwisilinganiso sethu sokushintshanisa kwemali.
Bona Rand wanamuhla, kanye ne-euro, i-dollar, i-yuan kanye nezinye zezimali zomhlaba ohlelweni lwethu lwe-inthanethi Isilinganiso sokubala sesilinganiso futhi ihumushe noma iyiphi imali ngesilinganiso esivumayo.
Izinga lokuwela elingu- Rand ngokumelene nedola ne-euro, izinga lesiphambano sedola kuqhathaniswa ne-euro, izinga lesiphambano se-euro kuqhathaniswa nedola namanye amanani ezimali ezinkulu zomhlaba amanani aphezulu noma imali eyinhloko. Zithinta amanani azo zonke ezinye zezimali zomhlaba.
In Rand isilinganiso sokushintshaniswa kwesilinganiso, sibheka amanani wokuwela alandelayo njengawokuqala:
Rand kuya ku-euro rate rate
Izinga lokushintshana le- Rand kudola laseMelika
Rand kuya ku-yuan rate yokuguqulwa
Rand kuya ku-yen yokuguqulwa kwesilinganiso
Amanani amaningi wokushintshana we Rand kwezinye izinhlobo zezimali zibalwa ngesisekelo salale amanani. Isibonelo, inani lokushintshana le Rand kuya Vanuatu Vatu imvamisa ibalwa ngokuya ngesilinganiso sokushintshana Rand ngokumelene nedola laseMelika kanye ne-Euro. Imithombo yolwazi yokubala inani le Rand yanamuhla amanani asungulwe ngokusemthethweni avela ebhange likazwelonke nakwibhange laseYurophu.
Ngaphezu kwamakhasi wosizo ne Rand exchange rate online namuhla August 01, 2021 ku Forex emakethe, ziningi ezinye izinsiza zemali yamahhala esizeni.
Amabhange abale amanani okuguqula azo zonke zezimali, kufaka phakathi Rand, namuhla nsuku zonke kususelwa ekubalweni kokuthengiselana ngokushintshana. Landelela kuwebhusayithi amanani asheshayo wamanani wokushintshaniswa ekushintshisaneni. Ngokwesibonelo, isilinganiso sokushintshana Rand ekushintshanisweni kwe-Forex online.
moneyratestoday.com ngesikhathi sangempela Abaqaphi wonke amanani entengo yemali emhlabeni.
Kumanani wokubala amanani wokushintsha, imininingwane yamanani wokushintshana ithathwa emithonjeni evulekile nesemthethweni.
isilinganiso esiphakeme Rand kuya ekushintshanisweni kwedola ne-euro kusuka ebhange elikhulu lesizwe lanamuhla,
ikhombisa izinga lokuwela elingu- Rand kuqhathaniswa nedola ne-euro evela eBhange laseYurophu,
osheshayo Rand emakethe yokushintshaniswa kwe-inthanethi online.
Sebenzisa umshini wokubala wokushintshanisa kulula kakhulu.
Ukuthola isilinganiso sokheshi olulodwa kuqhathaniswa nenye imali, faka amagama alezi zinhlobo emasimini wokubala wemali yethu bese uchofoza inkinobho yokubala. Ungafaka imibono yabo kunqubo yamazwe omhlaba. Ukubona inani lokuphindisela, bese ushintsha indawo yezezimali ezihlobene, chofoza ukuxhumana "shintsha".
Uma udinga izinga lokushintshana Rand kudola laseMelika, bese ufaka igama Rand emkhakheni wokuqala wokubala amanani wokushintshanisa, nasensimini yesibili "idola laseMelika". Uma udinga inani lokuwela ledola laseMelika Rand, bese uqhafaza u- "shintsha" bese umshini wokubala ezokukhombisa inani eliphambene.
Kokubala kunendlela yesibili yokuthola lokho Rand isilinganiso sokushintshaniswa kunoma iyiphi enye imali yomhlaba.
Ekhasini lesevisi, umshini wokubala izinga lokushintshisana wewebhusayithi mariratestoday.com ebhlokini Exchange rates. Zonke emhlabeni ukuguqulwa kwemali. Uhlu lwezezimali olutholakalayo Rand bese uchofoza kusixhumanisi Rand isilinganiso sokushintshaniswa kwenye imali oyidingayo.
Kumanani wokubala amanani wokushintshanisa, imininingwane ngamanani wokushintshana asemthethweni ayabuyekezwa masisha lapho isethwe ngamabhange asemthethweni.
Amanani okushintshana nge-inthanethi avuselelwa njalo ngemizuzwana engama-30.
Inhlanhla yokusebenzisa insiza yokubala izinga lokushintshanisa.